Ma Sidanuu Ku Dambeeyay Xiddigii Loo Han-Weynaa? - Maamulka Real Madrid Oo Qaab Amaah Ah Ku Diri Kara Mid Kamida Shanta Saxeex Ee Dhawaan Kooxdooda Kusoo Biiray. - Gool24.Net
Ma Sidanuu Ku Dambeeyay Xiddigii Loo Han-Weynaa? – Maamulka Real Madrid Oo Qaab Amaah Ah Ku Diri Kara Mid Kamida Shanta Saxeex Ee Dhawaan Kooxdooda Kusoo Biiray.
Real Madrid ayaa soo qaadatay kulamo ay bandhig liita kusoo muujisay ciyaarihii ka horreeyay xilli ciyaareedka cusub balse waxa ay musiibo khaas ah ku noqon kartaa weeraryahan Luka Jovic kaas oo hubaanti la’aan mustaqbalkiisa ah wajahaya.
Jovic kaliya laba bilood ayuu si rasmi ah u yahay ciyaartoy Real Madrid ah kaddib markii uu 62 Milyan ugaga soo wareegay dhinaca kooxda Frankfurt.
Jovic ayaa ahaa saxeexii koowaad ee uu Zidane u sameeyay Real Madrid xagaagan isaga oo qalinka ugu duugay heshiis lix sano ah.
Wargeyska Marca oo soo xiganayay warar uu ka helay il wareedyo kasoo jeeda dalka Jovic uu u dhashay ee Serbia ayaa sheegaya in tababare Zinadine Zidane uusan la dhicin hanaanka ciyaareed ee xiddigan isla markaana uu ka fikirayo inuu durtaba amaah ku diro.
Intaa waxa dheer in Jovic uu dhaawac gaadhay mudada yar ee uu soo joogay Los Blancos gaar ahaan kulankii saaxiibtinimo ee ay guuldarrada bahdilaada ah ee 7-3 ah kala soo kulmeen Atletico Madrid.
Si guud ahaaneed wararka ayaa sheegaya in Zidane uusan ku qanacsanayn waxa uu ka arkay 21 sano jirkan xilli horyalka La Liga uu sabtidan si rasmi ah u bilaabmayo iyadoo Madrid ay ku furanayso kooxda Celta Vigo.
Zidane iyo kooxdiisa ayaa usoo dulqaatay dhibaatooyin kulamadii ka horreeyay xilli ciyaareedka ah iyagoo kusoo dhibtooday garoonka dhexdiisa iyo banaankiisaba.
Marka laga yimaado caqabadaha natiijooyinka, Madrid ayuu dhaawac xumi ka gaadhay Marco Asensio oo la filayo inuu inta badan xilli ciyaareedka cusub maqnaan doono halka ay ku adkaatay inay kooxda ka diraan Gareth Bale.